काठमाडौँ, ३१ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सात जना डाक्टरको दशौँ तहमा स्तरबृद्धि गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार उनीहरुको स्तरबृद्धि गरेको हो । स्तरबृद्धिमा पर्नेहरुमा गुल्मी अस्पतालका मेसु डा. […]
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमा फैसला गरेको छ। अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। साथै संविधानको धारा […]
वुहान – चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहानस्थित प्रयोगशालाका कुनै पनि कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ता कोरोनाबाट सङ्क्रमित नरहेको चीनले फेरि एक पटक दोहोराएको छ । अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर […]
देउवा सरकारलाई १८ महिनाअघि हटाउन सकिन्छ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसदको बाँकी कार्यकाल शासनसत्ता चलाउन १६५ सांसदले विश्वासको मत दिए। उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री बनेसँगै अब डेढ वर्षपछि […]
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। शनिबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवम् सिफारिसमा भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम […]
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) का नेता तथा प्रान्तीय सभाका पूर्व सदस्य मलिक शहान हक्मीन खानलाई बुधवार एटोकमा गोली हानी हत्या गरिएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार जनाएका छन् । पाकिस्तानी पत्रिका डनका […]
काठमाडौं । आज देशभर थप १ हजार ८७५ जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार ३७४ पीसीआर र ५१३० जनाको एन्टीजेन गरी १० हजार […]